गायिका टिका पुन र गायक मानव कालुङ मगरको आवाजमा ‘ए कान्छि ’ –भिडियो सहित) - Enepalese.com
गायिका टिका पुन र गायक मानव कालुङ मगरको आवाजमा ‘ए कान्छि ’ –भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७५ माघ २ गते ३:१३ मा प्रकाशित
सानै उमेर आफुलाई जन्मदिने आमा गुमाएका गायक मानव कालुङ मगरको बाःतविक जिवन भोगाईँमा आधारित गीत ‘ए कान्छि ’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ . आफनो मौलिक कौडा गीतमा गायिका टिका पुन र गायक मानव कालुङ मगरको आवाज रहेको छ . प्रियसी म्युजिक प्रालीले गीतको भिडियोलाई बजारमा ल्याएको हो .
गीतमा हजारौ परदेशी युवाह?को जिवन कथालाई समेटिएको छ . आफनी प्रेमीकालाई छोडेर बाहिर देशमा जानु पर्नें नेपाली युवाको पिडालार्इं गीतमा निकै मार्मिक तथा रोचक ?पमा समेटिएको छ . गम बयम्बु मगरको शब्द तथा मौलिक लय सिर्जना रहेको छ . मुकेश हुमाँगाईँको छायाँकन , अविनास डिसीको सम्पादन , रविन शाहको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ . गीतमा शरिष्मा मगर र मानव कालुङ मगरको अभिनय रहेको छ .
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु होला .